ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ (တရားဝင် အခေါ်အားဖြင့် ပေါ်တူဂီ သမ္မတနိုင်ငံ[မှတ်စု 1]) သည် ဥရောပ အနောက်တောင်ပိုင်း အိုင်ဘေးရီးယန်းကျွန်းဆွယ် ပေါ်တွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီသည် ဥရောပ၏ အနောက်ဘက် အကျဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်နှင့် တောက်ဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ၊ အရှေ့ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် စပိန်နိုင်ငံ တို့က ဝိုင်းရံထားသည်။ အတ္တလန္တိတ် ကျွန်းစုများ ဖြစ်ကြသော အာဇိုး နှင့် မဒရီရာ တို့သည် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ တစိတ်တဒေသ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "A Portuguesa"
• ဒီဖက်တို ဘုရင်စနစ်
ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ ၁၁၂၈
ဇူလိုင်လ ၂၅၊ ၁၁၃၉
အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ ၁၉၁၀
၁၀,၃၅၅,၈၂၄ (အဆင့် - ၇၇)
၁၁၄ (အဆင့် - ၈၇)
ပေါ်တူဂီ (Portugal) ဆိုသော စကားလုံးသည် Portus Cale ဟူသော ရောမ-ခဲလ်တစ် နေရာတစ်ခု၏အမည်မှ ဆင်းသက်လာ၍ ထိုနေရာသည် လက်ရှိ၌ Vila Nova de Gaia မြို့တည်ရှိကာ ယင်းမြို့သည် ပေါတူဂီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဒိုရိုမြစ်ဝတွင်တည်ရှိ၏။ Portus စကားလုံးသည် လက်တင်ဘာသာစကား port သို့ harbour မှဖြစ်၍ သင်္ဘောဆိပ်ဟု အနက်ရသည်။ Cale စကားလုံး၏ ဖြစ်နိုင်ချေမှာ ကတ်စထရိုလူမျိုး ယဉ်ကျေးမှု စကားလုံးဖြစ်နိုင်ကာ ထိုလုမျိုးများကို Callaeci, Gallaeci or Gallaecia စူ၍လည်း အသိများကြပြီး ယင်းတိုသည် အိုက်ဘေးရီးယန်းကျွန်းဆွယ် အနောက်မြောက်ပိုင်းကို သိမ်းပိုက်နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်မှာ အများစုလက်ခံထားသော ဝေါဟာရဇာစ်မြစ် ရှင်းတမ်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ရှိနေသော သဘောတရားတစ်ခုအရ Cala သည် ရာသီဥတုကိုစောင့်ရှောက်သော ခဲလ်တစ်နတ်သမီး Cailleach ကိုရည်ညွှန်းသည်လည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ပြင်သစ်ပညာရှင်များလက်ခံသည်မှာ နိုင်ငံ၏အမည်သည် ဂေါလ်စ် (သို့) ဆဲ့လ်တ် ဆိပ်ကမ်း (Gauls သို့ Celts) 'Portus Gallus' မှ ဆင်းလာနိုင်ချေ ရှိသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကျော်ဝိုင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Port ဝိုင်တွေက ပေါ်တူဂီနိုင်ငံကနေ တင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တူမြို့ Douro တောင်ကြား စပျစ်ခြံတွေကနေထွက်ရှိတဲ့ သည်စပျစ်ဝိုင်တွေကို အမေရိကန်၊ ဩစတေးလျ၊ တောင်အာဖရိကနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဆီ အဓိကတင်ပို့ကြပါတယ်။ အဓိကစီးကပွားရေးကတော့ ချည်မျှင်နှင့်အထည်အလိပ်၊ သစ်၊ စက္ကူ၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ စက်မှုအစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် ဟိုတယ်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်စာရင်းများအရ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ နှစ်စဉ်ပျဉ်းမျှဝင်ငွေဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၃၂၁၉၉ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့် ၃၇ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးစနစ်အနေနဲ့ကတော့ ဥရောပနိုင်ငံအများစုမှာသုံးတဲ့ Euro ကိုပဲသုံးပါတယ်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံက စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၈၅% ဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သည်အထဲက ၈၁% ကတော့ ရိုမန်ကစ်သလစ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ၄% ကတော့ ကျန်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ ဖော့ဆို့တွေရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်ဟာ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီဟာ ဖော့ဆို့တွေဖြစ်လာစေတဲ့ Cork Oak သစ်တောပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖော့ဆို့တွေရဲ့ ၇၀% ဟာ ပေါ်တူဂီမှဖြစ်ပြီး ဂျာမနီ၊ ယူကေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေစီ အဓိကတင်သွင်းပါတယ်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံရဲ့အဓိက အားကစားကတော့ ဘောလုံးဖြစ်ပြီး ပေါ်တူဂီဘောလုံးအသင်းဟာ ဥရောပချန်ပီယံအသင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၆၆ မှာ ကမ္ဘာ့ဖလား တတိယဆု၊ ၂၀၁၆ မှာတော့ ကမ္ဘာ့ဖလား စတုထ္ထဆုတွေ အသီးသီးပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီမှာ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ပေါင်း ၁၅ နေရာတောင်ရှိပါတယ်။ သည်နေရာမှာ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပေါင်း ၁၄ခုရှိပြီး သဘာဝအမွေအနှစ် Madeira ကျွန်း ၁ ခုရှိပါတယ်။
ပေါ်တူဂီကို အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် အနီးစပ်ဆုံး ပေါတျူဂယ်လ်၊ ပေါ်တူဂီစကားဖြင့် အနီးစပ်ဆုံး ပူရ်တူဂယ်လ် ဟုရွတ်ဆိုနိုင်သည်။
Portugal – Origin and meaning of the name Portugal by Online Etymology Dictionary။
Winicius, Marcos. "Documentos danca portuguesa".
Manuel géographique et statistique de l'Espagne et du Portugal ...။ Buisson (11 April 2018)။